မမအေး – Hlataw.com
မမအေး… မမအေး… အသကျ ၁၈ ၁၉နှဈ ခနျ့ ရှိ အသားဖွူဖွူ လူရညျ ခြောလေး မောငျ မောငျအိမျ အပျေါ ထပျ သို့ အပွေးအလှား တကျ လာရငျး နှုတျ မှတကွျော ကွျော အျော ချေါ လိုကျ သညျ ။“ဟဲ့… သနောလေး… ဘာဖွဈ လို့ ဒီလောကျ အျော ကွီး ဟဈ ကယျြ လုပျ နရေတာလဲ ငမောငျ …”အခနျးတဈ ခုထဲမှ အသားညိုညို အသကျ ၂၅နှဈ ခနျ့ ကိုယျ လုံးကိုယျ ပေါကျ တောငျ့ တငျးလှပသူလေး တဈ ယောကျထဘီရငျ လြားခါ လကျ မှ ဘီးတဈ ခြောငျးကို ကိုငျ ပွီး ခေါငျးဖွီးရငျး ထှကျ လာသညျ ။အေးအေးမျော သညျ မောငျ မောငျ နှငျ့ မောငျ နှမ ၂ဝမျးကှဲ တျော စပျ ပွီး တက်ကသိုလျ ကြောငျးသူတဈ ဦး ဖွဈ သညျ ။မောငျ မောငျ သညျ တောမှနေ၍ မွို့ကြောငျး လာနခွေငျး ဖွဈ သညျ ။ယခုလညျး ကိုးတနျး အောငျ စာရငျး ထှကျ သညျ့ အခြိနျ ဖွဈ ပွီး စာမေးပှဲ အောငျ သဖွငျ့ ဝမျးသာ အားရစှာ အိမျ သို့ ပွနျ လာခွငျးပငျ ။
“ကနြျော စာမေးပှဲ အောငျ တယျ ဗြ ဟား ဟား…” “ဟဲ့… ဟဲ့… ငမောငျ … နငျ ဘယျ လိုဖွဈ …”“ဟား ဟား… ပြျော လှနျးလို့ပါဗြာ… ဝမျးသာလှနျးလို့ ကိုယျ့ အမကို ဖကျ တာပဲဟာ…”။မောငျ မောငျ သညျ ဝမျးသာ အားရစှာဖွငျ့ ပါးစပျ မှ တတှတျ တှတျ ပွောဆိုရငျး အေးအေးမျော ကို ပှဖေ့ကျ မှရေ့မျးလိုကျ သဖွငျ့အေးအေးမျော ခမြာ ကုတငျ ပျေါ သို့ နှဈ ယောကျ စလုံးပကျ လကျ လနျ လဲကသြှားရရှာသသညျ ။ထဘီမှာလညျး လြော့၍ နမေထိလမေထိသဖွငျ့ ဝငျးဝါနတေဲ့ရှရေငျ အစုံပါ ပျေါ သှားရရှာသညျ ။“….အိုး…..ငမောငျ …..နငျ တျော တျော မွူး…ဒီမှာ လုံခညျြ တောငျ ကြှတျ ကုနျ ပွီဟဲ့….” ယငျးကဲ့သို့ အေးအေးမျော ကပွောလိုကျ သဖွငျ့ ။မောငျ မောငျ သညျ …လူးလဲထလိုကျ ပွီး ပွလြေောနသေော သူမရဲ့ထဘီကိုအပျေါ သို့ပွနျ လညျ ဆှဲတငျ ပေးလိုကျ ရာမှဝငျးဝါမို့မောကျ နတေဲ့ ရှရေငျ ဖွိုးဖွိုးကို ဆုပျ ကိုငျ မိသားဖွဈ သှားသညျ ။“……ဟဲ့…..အို……ငမောငျ ……” “…..ကနျ တော့…..မမအေး…..ကနျ တော့ပါ…..
ကနြျော …ပြျော လှနျးလို့ ကယောငျ ကတမျးဖွဈ သှားတယျ …..မမရယျ ….”ပါးစပျ ကသာ ယငျးကဲ့သို့ပွောနပေမေဲ့….ဆုပျ ကိုငျ မိတဲ့နို့ကိုတော့ မဖယျ ရှားမိဘဲ ရောရောငျ ဆုပျ ကိုငျ နဆေဲပငျ ………။နူးညံ့အိထှေးသောအထိအတှကေ့လူကို သှေးတိုးမွနျ စသေလို ဓာတျ မတညျ့ သော ဖိုမသဘာဝမို့အေးအေးမျော ခမြာ….ရှိနျးကနဲ….ဖိနျးကနဲတကိုယျ လုံးတုံအောငျ ကွကျ သီး ထသှားမိသလို…..ရုနျးကနျ ဖယျ ရှားရမညျ့ အစား မောငျ မောငျ ရဲ့လကျ ပျေါ မှနေ၍ မိမိရဲ့လကျ တှကေို အုပျ ကိုငျ နမေိလိုကျ သညျ ။မောငျ မောငျ ကလညျး အမှတျ မထငျ ဆုပျ ကိုငျ ထားမိတဲ့အေးအေးမျော ရဲ့ ပွညျ့ ဖွိုးဖေါငျးကားနတေဲ့ နို့တှကေိုဆုပျ ကိုငျ ဖဈြ ညှဈ ဆော့ကစားနမေိပွနျ သညျ ။တကိုယျ လုံးမှလညျး သှေးစီးခြောငျးတလြှောကျ ဖွတျ သနျးစီးဆငျးနသေညျ မို့ အတှအေ့ထိအပျေါ သာယာလာကာ…….မိနျးမောတှဝေနေတေဲ့ အေးအေးမျော ရဲ့ဖူးဖူးရှရှနှုတျ ခမျးနှဈ လှာကို
အင်ျဂလိပျ ရုပျ ရှငျ ဇာတျ ကားထဲက……..မငျးသား၊မငျးသမီးနှုတျ ခမျးစုပျ သလို
ဖိကပျ နမျးရှိုကျ စုပျ ယူလိုကျ မိသညျ အထိ……အသိတရားတို့ဟာ…ဝဝေါးကုနျ ကသြညျ ။
အေးအေးမျော မှာလညျး မောငျ နှမဝမျးကှဲခွငျး မသငျ့ တျော ဘူးဆိုတဲ့ အသိတရားတှေ လကျ လှတျ ပွီး။
မောငျ မောငျ ရဲ့ကြောပွငျ ကိုပွနျ လညျ ဖကျ တှယျ လိုကျ မိသညျ အထိ…. အတှနေ့ောကျ ကိုလိုကျ ပါသှားမိရရှာသညျ ။
နှဈ ဦးစလုံးသညျ မထငျ မှတျ ဘဲ…..မရညျ ရှယျ ပါဘဲနှငျ့ လှတျ လပျ သောဆိပျ ကှယျ ရာတှငျ
လောက၏အဆုံးစှနျ သော ခရီးတဈ ခုကိုဖွဈ သနျးကဖြို့ တာစူနရောယူမိလိုကျ ကွ၏။
အေးအေးမျော သညျ တက်ကသိုလျ ကြောငျးသူတဈ ဦးပငျ ဖွဈ သျော လညျး
နောကျ ဆုံးနှဈ တကျ နခြေိနျ အထိ ခဈြ သူရညျးစားမထားဖူးသူ….။
ဆံပငျ ဂုတျ ဝဲတှကွေားထဲမှ ဖနောငျ့ အထိရှညျ လြားလှတဲ့….သူမရဲ့ဆံပငျ ကို ဘီးစပါတျ ကွီးတကားကားနဲ့ရှိနဆေဲ…….
မကျြ နှာဝိုငျးသရောငျ ရှိပွီး မကျြ လုံးမကျြ ခုံးကောငျးကောငျး….
နှာတံပျေါ ပျေါ အရပျ ကမနိမျ့ မမွငျ့ ကိုယျ လုံးကိုယျ ပေါကျ ကတောငျ့ တငျးပွညျ့ ဖွိုးလှနျး၏။
မို့မောကျ လုံးဝနျးနတေဲ့ရှရေငျ စုံ….သေးသှယျ သောခါး…..စှငျ့ ကားရမျးခါနတေဲ့တငျ …..
မွငျ ရသူပုရိသမြား ပွဈ မှားခငျြ စရာကောငျးလှသညျ ။
မောငျ မောငျ ဆိုသညျ ကလညျး ဆယျ့ လေးဆယျ့ ငါး နှဈ ၊မူလတနျးကြောငျးသားဘဝကထဲက အတူနအေတူအိပျ နလောသူ…..
တက်ကသိုလျ ကြောငျးသူမဖွဈ ခငျ အထကျ တနျးကြောငျးသူဘဝကမြှ တကုတငျ စီခှဲအိပျ ကပြမေဲ့ အခနျးကတော့ တဈ ခနျးထဲပငျ ….
ယခငျ ကတော့ဘယျ လိုမှမဖေါကျ ပွားကွ……ရတေောငျ မှနှဈ ယောကျ အတူခြိုးတဲ့အခါခြိုးပွီး ခေါငျးလြှျော တဲ့နတှေ့မှော
မောငျ မောငျ ကိုယျ တိုငျ ခေါငျးလြှျော ပွီး ဆံပငျ ကိုဖွီးသငျ ပေးခဲ့ရတာအကွိမျ ကွိမျ ပငျ …….. ကနတေ့ော့ မထငျ မှတျ တာတှဖွေဈ ကုနျ ကွပွီ……..။
အေးအေးမျော စောစောကတယောကျ ထဲရခြေိုးနရေငျး မိမိရဲ့ခန်ဓာကိုယျ ကအသားဆိုငျ တှဆေုပျ ကိုငျ ဖွဈ ညှဈ လိုကျ မိပွီး
မတောငျးတစဖူး တစိမျးတရံယောကျြားနဲ့ ကာမခရီးကို လြှောကျ လှမျးခငျြ တဲ့စိတျ ဆန်ဒတှဖွေဈ ပျေါ လာသညျ အထိဖီးလျ တှအေရမျးတကျ လာမိ၏။
မောငျ မောငျ ဆိုသညျ ကလညျး လကျ တှသေ့ာမလိုးဖူးသေးပမေဲ့ အရပျ ထဲမှ ညမီးကငျးစောငျ့ ရငျး
လူပြိုကွီးကိုထှနျးမောငျ ရဲ့လကျ တှပေို့ခခြကျြ တှေ နားရညျ ဝနသေလို
သူငယျ ခငျြးတှနေဲ့ တခါတခါ ဖူးလျ ကားတှကွေညျ့ ရငျးက မွငျ တှထေ့ားသမြှ မကျြ စထေဲ့စှဲမှတျ နသေူဖွဈ သညျ ။
ယခုလညျးကွညျ့ အေးအေးမျော ရဲ့နှုတျ ခမျးတှေ ပါးတှကေိုစုပျ နမျးပွီး
သူမရဲ့ရှရေငျ ဖွိုးဖွိုးတဘကျ ကို ပါးစပျ ဖွငျ့ ငုံခဲ၍ကလေးမြားနို့စို့သလို တပွှတျ ပွှတျ အသံထှကျ အောငျ စို့၍
ကနျြ နို့တဘကျ ကိုလကျ ဖွငျ့ အုပျ ကိုငျ ဆုပျ ခပြေေးနသေလို
မာခဲနတေဲ့နို့သီးခေါငျးလေးကို လကျ မနဲ့လကျ ညှိုးကွားမှညှပျ ပွီး ပှတျ နလေိုကျ လေ၏။
“……ဟငျး….ဟငျး…..အား……ဟငျ့ …..ဟငျ့ ……” အေးအေးမျော ရဲ့နှုတျ ဖြားမှ မပီဝိုးတဝါး ငွီးငွူသံတဈ ရပျ ထှကျ ပျေါ လာလသေညျ ။
နို့ကို သူ့ရဲ့အာနှေးနှေးကွီးနဲ့ငုံခဲပွီး ကလေးတှလေိုတပွှတျ ပွှတျ စို့လိုကျ တော့ ကမြလေ ခါးလေးကော့သှားပွီး တကိုယျ လုံးတုံသှားရတယျ ……။
နောကျ ပွီး ဘယျ လိုဖျော ပွရမှနျး မသိတဲ့ ခံစားမှုတဈ မြိုးကလညျး အသဲတှကေလီဇာတှပွေုတျ ထှကျ လုမတတျ ခံစားမိရတယျ ……
နို့သီးခေါငျးလေးကိုပှတျ ခလြေိုကျ တဲ့အခါမှာ တကယျ ပါဘဲ……တကိုယျ လုံး ကငျြ တကျ သှားပွီး
ကမြရဲ့စောကျ ခေါငျးထဲက စဈ ကနဲ……စဈ ကနဲ ဖွဈ သှားပွီး အရတှေကေကြုနျ ပွီရှငျ့ ……။
ဟောကွညျ့ ……ဘယျ အခြိနျ ကခြှတျ ပဈ လိုကျ မှနျးမသိဘူး……ခါးမှာထဘီမရှိတော့ဘူး
ပွညျ့ ဖွိုးတငျးမာနတေဲ့ကမြရဲ့ပေါငျ တှငျးသားတှကေို သူ့လကျ တဘကျ က ဖှဖှရှရှလေး ပှတျ သပျ နပွေနျ တယျ …….
ယား…….ယားလိုကျ တာရှငျ ဘယျ လိုနရေမှနျးမသိတော့ဘူး…..ကွကျ သီးတှေ တဖနျြးဖနျြးထကုနျ တယျ …..
ခွဖြေားလကျ ဖြားတှလေညျး တဆတျ ဆတျ တုံပွီး ရငျ ထဲမှာ ဟာတာတာကွီး……
သူမရဲ့ပေါငျ တှငျးသားတှကေို ပှတျ သပျ နရောမှ။
မို့မို့ဖေါငျးဖေါငျးနဲ့အလယျ မှာ အကှဲကွောငျးရာလေးကို လကျ ခလယျ နဲ့အထကျ အောကျ ပှတျ သပျ ပေးရငျးမှ
စောကျ ခေါငျးတှငျးကို လကျ ခလယျ နဲ့ထိုးမှပေေးလိုကျ ပွနျ တော့
သူမပေါငျ နှဈ ခေါငျးဘေးသို့ကားသှားလတေော့သညျ ။
အား…..အငျ့ ….ဟငျ့ ……စှိ….စှိ…..စှတျ …..စှတျ … မပီဝိုးတဝါးအသံလေးတှထှေကျ လာသညျ ……
အခုနတေော့ ဘေးခငျြးယှဉျ နရောမှ မောငျ မောငျ သညျ သူမ၏ရငျ ဘတျ ပျေါ ကို မှောကျ ခလြိုကျ သညျ …….. ။
အလိုကျ သငျ့ ကားနတေဲ့သူမရဲ့ပေါငျ နှဈ ခြောငျးကွားမှာလီးနဲ့…..စောကျ ဖုတျ တှကွေ့ပွီး အဝတျ မဲ့အသားနှဈ ခုပူနှေးစှာထိကပျ မိလိုကျ ကွသညျ ။
“……ဟငျး…..ဟငျး……အီး..ဟငျ့ ……” မောငျ မောငျ ရဲ့နှုတျ မှ……အမညျ မဖျော စှမျးနိုငျ သော ငွီးငွူသံတဈ ရပျ ပွုလိုကျ မိသညျ ။
မောငျ မောငျ သူမရဲ့နို့ကွီးနှဈ လုံးကို ဆုပျ ကိုငျ ဖွဈ ညှဈ လိုကျ ၏။
သူ၏လိငျ တနျ မှာလညျး တဆတျ ဆတျ တုံကာ လိုးခငျြ စိတျ နှငျ့ မာထနျ ပွီး ထှားလြှကျ ရှိ၏။
သူ၏လီးကွီးမှာ အေးအေးမျော ရဲ့စောကျ ဖုတျ အထကျ နားမှာ အလြားလိုကျ မေးတငျ ဖိကပျ ထားရာ
မာထနျ ကွီးထှားနတေဲ့ လီးက အေးအေးမျော ရဲ့ဗိုကျ သားကိုထောကျ မိနရော ပူနှေးသောအထိအတှတေ့ဈ ရပျ ကို ခံစားမိသညျ ။
တဖွညျးဖွညျး လူးလှနျ့ နသေော အေးအေးမျော ရဲ့မကျြ နှာလေးမှာ ရမ်မကျ သှေးကွောငျ့ ရဲရဲတှတျ နီကာ ခြှေးစီးလေးမြားဖွငျ့ ပွောငျ လကျ ၍နေ၏။
နကျ မှောငျ သောဆံစလေးမြား ကလညျး သူမ၏မကျြ နှာဝိုငျးဝိုငျးလေးကို တခြို့တဝကျ ဖုံးအုပျ လြှကျ ရှိရာ မကွာခဏ လကျ ဖြားဖွငျ့ ဖယျ ရှားနရေရှာ၏။
နကျ မှောငျ သော မကျြ တောငျ ကော့ကော့ကွီးမြားက အရညျ လဲ့နသေော မကျြ လုံးကို တဖတျြ ဖတျြ ရိုကျ ခတျ ဖုံးအုပျ စပွေနျ သညျ ။
…..ရုနျးကနျ ဖယျ ရှားငွငျးဆနျ ရမညျ့ အစား သူမ၏လကျ မြားက မောငျ မောငျ ကြောပွငျ ကို ပှတျ သပျ ဆုတျ ခဆြှေဲဖကျ လြှကျ ရှိနပွေနျ သညျ ။
မောငျ မောငျ မှာလညျး ဆန်ဒတှပွေငျးထနျ လာပွီး ဖွဈ သမို့အေးအေးမျော ရဲ့ အဝတျ မဲ့ခန်ဓာကိုယျ ပျေါ အလြားလိုကျ မှောကျ နရောမှ ဖငျ ကွီးကိုတဖွေးဖွေးကွှလာ၏။
ထိုအခါ လီးထိပျ ကွီးက အေးအေးမျော ၏ဆီးခုံပျေါ မှနေ၍ စောကျ ပတျ အကှဲကွောငျး အတိုငျး တဖွေးဖွေးလြော့ကဆြငျးလာသညျ ။
အဲဒီတဒင်ျဂအတှငျးမှာ ပှတျ တိုကျ မှု၏အရသာမှာ မတှဘေူ့းသော မမနေို့ငျ စှမျးသော အထိအတှကေို့ ပူထူရှိနျ ဖိနျးပွီး သိမျ့ သိမျ့ လှုပျ ခါလာကွသညျ ။
“……..ဟငျး…..ဟငျး……..ဟငျး……ဟငျး…….” ခေါငျးလေးကို ဘယျ ညာ ယမျးခါလူးလှိမျ့ ရငျး
ကာမ၏အလကျြ ဓာတျ စိမျ့ ဝငျ စီးဆငျးမှုဒဏျ ကို
အေးအေးမျော အလူးအလဲခံစားနရေသဖွငျ့ တဟငျးဟငျးငွီးငွူလိုကျ မိရ၏……
စောကျ ခေါငျးဝကို ပူနှေးသောမောငျ မောငျ ၏လီးထိပျ အထိအတှကွေ့ောငျ့
သူမပေါငျ နှဈ ခြောငျးကို ဘေးသို့အစှမျးကုနျ ကားလိုကျ မိသညျ ။
ပွလှတျ ……ကနဲ အသားခွငျးပှတျ တိုကျ သံတိုးတိုးလေးထှကျ လာပွီး
လီးထိပျ က အေးအေးမျော ရဲ့ စောကျ ပတျ ထဲကြှံကသြှားတော့၏………
မမအေး… မမအေး… အသက် ၁၈ ၁၉နှစ် ခန့် ရှိ အသားဖြူဖြူ လူရည် ချောလေး မောင် မောင်အိမ် အပေါ် ထပ် သို့ အပြေးအလွား တက် လာရင်း နွုတ် မှတကြော် ကြော် အော် ခေါ် လိုက် သည် ။“ဟဲ့… သေနာလေး… ဘာဖြစ် လို့ ဒီလောက် အော် ကြီး ဟစ် ကျယ် လုပ် နေရတာလဲ ငမောင် …”အခန်းတစ် ခုထဲမှ အသားညိုညို အသက် ၂၅နှစ် ခန့် ကိုယ် လုံးကိုယ် ပေါက် တောင့် တင်းလှပသူလေး တစ် ယောက်ထဘီရင် လျားခါ လက် မှ ဘီးတစ် ချောင်းကို ကိုင် ပြီး ခေါင်းဖြီးရင်း ထွက် လာသည် ။အေးအေးမော် သည် မောင် မောင် နှင့် မောင် နှမ ၂ဝမ်းကွဲ တော် စပ် ပြီး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ် သည် ။မောင် မောင် သည် တောမှနေ၍ မြို့ကျောင်း လာနေခြင်း ဖြစ် သည် ။ယခုလည်း ကိုးတန်း အောင် စာရင်း ထွက် သည့် အချိန် ဖြစ် ပြီး စာမေးပွဲ အောင် သဖြင့် ဝမ်းသာ အားရစွာ အိမ် သို့ ပြန် လာခြင်းပင် ။
“ကျနော် စာမေးပွဲ အောင် တယ် ဗျ ဟား ဟား…” “ဟဲ့… ဟဲ့… ငမောင် … နင် ဘယ် လိုဖြစ် …”“ဟား ဟား… ပျော် လွန်းလို့ပါဗျာ… ဝမ်းသာလွန်းလို့ ကိုယ့် အမကို ဖက် တာပဲဟာ…”။မောင် မောင် သည် ဝမ်းသာ အားရစွာဖြင့် ပါးစပ် မှ တတွတ် တွတ် ပြောဆိုရင်း အေးအေးမော် ကို ပွေ့ဖက် မွေ့ရမ်းလိုက် သဖြင့်အေးအေးမော် ခမျာ ကုတင် ပေါ် သို့ နှစ် ယောက် စလုံးပက် လက် လန် လဲကျသွားရရှာသသည် ။ထဘီမှာလည်း လျော့၍ နေမထိလေမထိသဖြင့် ဝင်းဝါနေတဲ့ရွေရင် အစုံပါ ပေါ် သွားရရှာသည် ။“….အိုး…..ငမောင် …..နင် တော် တော် မြူး…ဒီမှာ လုံချည် တောင် ကျွတ် ကုန် ပြီဟဲ့….” ယင်းကဲ့သို့ အေးအေးမော် ကပြောလိုက် သဖြင့် ။မောင် မောင် သည် …လူးလဲထလိုက် ပြီး ပြေလျောနေသော သူမရဲ့ထဘီကိုအပေါ် သို့ပြန် လည် ဆွဲတင် ပေးလိုက် ရာမှဝင်းဝါမို့မောက် နေတဲ့ ရွေရင် ဖြိုးဖြိုးကို ဆုပ် ကိုင် မိသားဖြစ် သွားသည် ။“……ဟဲ့…..အို……ငမောင် ……” “…..ကန် တော့…..မမအေး…..ကန် တော့ပါ…..
ကျနော် …ပျော် လွန်းလို့ ကယောင် ကတမ်းဖြစ် သွားတယ် …..မမရယ် ….”ပါးစပ် ကသာ ယင်းကဲ့သို့ပြောနေပေမဲ့….ဆုပ် ကိုင် မိတဲ့နို့ကိုတော့ မဖယ် ရှားမိဘဲ ရောရောင် ဆုပ် ကိုင် နေဆဲပင် ………။နူးညံ့အိထွေးသောအထိအတွေ့ကလူကို သွေးတိုးမြန် စေသလို ဓာတ် မတည့် သော ဖိုမသဘာဝမို့အေးအေးမော် ခမျာ….ရှိန်းကနဲ….ဖိန်းကနဲတကိုယ် လုံးတုံအောင် ကြက် သီး ထသွားမိသလို…..ရုန်းကန် ဖယ် ရှားရမည့် အစား မောင် မောင် ရဲ့လက် ပေါ် မှနေ၍ မိမိရဲ့လက် တွေကို အုပ် ကိုင် နေမိလိုက် သည် ။မောင် မောင် ကလည်း အမှတ် မထင် ဆုပ် ကိုင် ထားမိတဲ့အေးအေးမော် ရဲ့ ပြည့် ဖြိုးဖေါင်းကားနေတဲ့ နို့တွေကိုဆုပ် ကိုင် ဖျစ် ညှစ် ဆော့ကစားနေမိပြန် သည် ။တကိုယ် လုံးမှလည်း သွေးစီးချောင်းတလျှောက် ဖြတ် သန်းစီးဆင်းနေသည် မို့ အတွေ့အထိအပေါ် သာယာလာကာ…….မိန်းမောတွေဝေနေတဲ့ အေးအေးမော် ရဲ့ဖူးဖူးရွရွနွုတ် ခမ်းနှစ် လွာကို
အင်္ဂလိပ် ရုပ် ရှင် ဇာတ် ကားထဲက……..မင်းသား၊မင်းသမီးနွုတ် ခမ်းစုပ် သလို
ဖိကပ် နမ်းရှိုက် စုပ် ယူလိုက် မိသည် အထိ……အသိတရားတို့ဟာ…ဝေဝါးကုန် ကျသည် ။
အေးအေးမော် မှာလည်း မောင် နှမဝမ်းကွဲခြင်း မသင့် တော် ဘူးဆိုတဲ့ အသိတရားတွေ လက် လွတ် ပြီး။
မောင် မောင် ရဲ့ကျောပြင် ကိုပြန် လည် ဖက် တွယ် လိုက် မိသည် အထိ…. အတွေ့နောက် ကိုလိုက် ပါသွားမိရရှာသည် ။
နှစ် ဦးစလုံးသည် မထင် မှတ် ဘဲ…..မရည် ရွယ် ပါဘဲနှင့် လွတ် လပ် သောဆိပ် ကွယ် ရာတွင်
လောက၏အဆုံးစွန် သော ခရီးတစ် ခုကိုဖြစ် သန်းကျဖို့ တာစူနေရာယူမိလိုက် ကြ၏။
အေးအေးမော် သည် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူတစ် ဦးပင် ဖြစ် သော် လည်း
နောက် ဆုံးနှစ် တက် နေချိန် အထိ ချစ် သူရည်းစားမထားဖူးသူ….။
ဆံပင် ဂုတ် ဝဲတွေကြားထဲမှ ဖနောင့် အထိရှည် လျားလှတဲ့….သူမရဲ့ဆံပင် ကို ဘီးစပါတ် ကြီးတကားကားနဲ့ရှိနေဆဲ…….
မျက် နှာဝိုင်းသရောင် ရှိပြီး မျက် လုံးမျက် ခုံးကောင်းကောင်း….
နှာတံပေါ် ပေါ် အရပ် ကမနိမ့် မမြင့် ကိုယ် လုံးကိုယ် ပေါက် ကတောင့် တင်းပြည့် ဖြိုးလွန်း၏။
မို့မောက် လုံးဝန်းနေတဲ့ရွေရင် စုံ….သေးသွယ် သောခါး…..စွင့် ကားရမ်းခါနေတဲ့တင် …..
မြင် ရသူပုရိသများ ပြစ် မှားချင် စရာကောင်းလှသည် ။
မောင် မောင် ဆိုသည် ကလည်း ဆယ့် လေးဆယ့် ငါး နှစ် ၊မူလတန်းကျောင်းသားဘဝကထဲက အတူနေအတူအိပ် နေလာသူ…..
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူမဖြစ် ခင် အထက် တန်းကျောင်းသူဘဝကျမှ တကုတင် စီခွဲအိပ် ကျပေမဲ့ အခန်းကတော့ တစ် ခန်းထဲပင် ….
ယခင် ကတော့ဘယ် လိုမှမဖေါက် ပြားကြ……ရေတောင် မှနှစ် ယောက် အတူချိုးတဲ့အခါချိုးပြီး ခေါင်းလျှော် တဲ့နေ့တွေမှာ
မောင် မောင် ကိုယ် တိုင် ခေါင်းလျှော် ပြီး ဆံပင် ကိုဖြီးသင် ပေးခဲ့ရတာအကြိမ် ကြိမ် ပင် …….. ကနေ့တော့ မထင် မှတ် တာတွေဖြစ် ကုန် ကြပြီ……..။
အေးအေးမော် စောစောကတယောက် ထဲရေချိုးနေရင်း မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ် ကအသားဆိုင် တွေဆုပ် ကိုင် ဖြစ် ညှစ် လိုက် မိပြီး
မတောင်းတစဖူး တစိမ်းတရံယောက်ျားနဲ့ ကာမခရီးကို လျှောက် လှမ်းချင် တဲ့စိတ် ဆန္ဒတွေဖြစ် ပေါ် လာသည် အထိဖီးလ် တွေအရမ်းတက် လာမိ၏။
မောင် မောင် ဆိုသည် ကလည်း လက် တွေ့သာမလိုးဖူးသေးပေမဲ့ အရပ် ထဲမှ ညမီးကင်းစောင့် ရင်း
လူပျိုကြီးကိုထွန်းမောင် ရဲ့လက် တွေ့ပို့ချချက် တွေ နားရည် ဝနေသလို
သူငယ် ချင်းတွေနဲ့ တခါတခါ ဖူးလ် ကားတွေကြည့် ရင်းက မြင် တွေ့ထားသမျှ မျက် စေ့ထဲစွဲမှတ် နေသူဖြစ် သည် ။
ယခုလည်းကြည့် အေးအေးမော် ရဲ့နွုတ် ခမ်းတွေ ပါးတွေကိုစုပ် နမ်းပြီး
သူမရဲ့ရွေရင် ဖြိုးဖြိုးတဘက် ကို ပါးစပ် ဖြင့် ငုံခဲ၍ကလေးများနို့စို့သလို တပြွတ် ပြွတ် အသံထွက် အောင် စို့၍
ကျန် နို့တဘက် ကိုလက် ဖြင့် အုပ် ကိုင် ဆုပ် ချေပေးနေသလို
မာခဲနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို လက် မနဲ့လက် ညှိုးကြားမှညှပ် ပြီး ပွတ် နေလိုက် လေ၏။
“……ဟင်း….ဟင်း…..အား……ဟင့် …..ဟင့် ……” အေးအေးမော် ရဲ့နွုတ် ဖျားမှ မပီဝိုးတဝါး ငြီးငြူသံတစ် ရပ် ထွက် ပေါ် လာလေသည် ။
နို့ကို သူ့ရဲ့အာနွေးနွေးကြီးနဲ့ငုံခဲပြီး ကလေးတွေလိုတပြွတ် ပြွတ် စို့လိုက် တော့ ကျမလေ ခါးလေးကော့သွားပြီး တကိုယ် လုံးတုံသွားရတယ် ……။
နောက် ပြီး ဘယ် လိုဖော် ပြရမှန်း မသိတဲ့ ခံစားမွုတစ် မျိုးကလည်း အသဲတွေကလီဇာတွေပြုတ် ထွက် လုမတတ် ခံစားမိရတယ် ……
နို့သီးခေါင်းလေးကိုပွတ် ချေလိုက် တဲ့အခါမှာ တကယ် ပါဘဲ……တကိုယ် လုံး ကျင် တက် သွားပြီး
ကျမရဲ့စောက် ခေါင်းထဲက စစ် ကနဲ……စစ် ကနဲ ဖြစ် သွားပြီး အရေတွေကျကုန် ပြီရှင့် ……။
ဟောကြည့် ……ဘယ် အချိန် ကချွတ် ပစ် လိုက် မှန်းမသိဘူး……ခါးမှာထဘီမရှိတော့ဘူး
ပြည့် ဖြိုးတင်းမာနေတဲ့ကျမရဲ့ပေါင် တွင်းသားတွေကို သူ့လက် တဘက် က ဖွဖွရွရွလေး ပွတ် သပ် နေပြန် တယ် …….
ယား…….ယားလိုက် တာရှင် ဘယ် လိုနေရမှန်းမသိတော့ဘူး…..ကြက် သီးတွေ တဖျန်းဖျန်းထကုန် တယ် …..
ခြေဖျားလက် ဖျားတွေလည်း တဆတ် ဆတ် တုံပြီး ရင် ထဲမှာ ဟာတာတာကြီး……
သူမရဲ့ပေါင် တွင်းသားတွေကို ပွတ် သပ် နေရာမှ။
မို့မို့ဖေါင်းဖေါင်းနဲ့အလယ် မှာ အကွဲကြောင်းရာလေးကို လက် ခလယ် နဲ့အထက် အောက် ပွတ် သပ် ပေးရင်းမှ
စောက် ခေါင်းတွင်းကို လက် ခလယ် နဲ့ထိုးမွေပေးလိုက် ပြန် တော့
သူမပေါင် နှစ် ခေါင်းဘေးသို့ကားသွားလေတော့သည် ။
အား…..အင့် ….ဟင့် ……စွိ….စွိ…..စွတ် …..စွတ် … မပီဝိုးတဝါးအသံလေးတွေထွက် လာသည် ……
အခုနေတော့ ဘေးချင်းယှဉ် နေရာမှ မောင် မောင် သည် သူမ၏ရင် ဘတ် ပေါ် ကို မှောက် ချလိုက် သည် …….. ။
အလိုက် သင့် ကားနေတဲ့သူမရဲ့ပေါင် နှစ် ချောင်းကြားမှာလီးနဲ့…..စောက် ဖုတ် တွေ့ကြပြီး အဝတ် မဲ့အသားနှစ် ခုပူနွေးစွာထိကပ် မိလိုက် ကြသည် ။
“……ဟင်း…..ဟင်း……အီး..ဟင့် ……” မောင် မောင် ရဲ့နွုတ် မှ……အမည် မဖော် စွမ်းနိုင် သော ငြီးငြူသံတစ် ရပ် ပြုလိုက် မိသည် ။
မောင် မောင် သူမရဲ့နို့ကြီးနှစ် လုံးကို ဆုပ် ကိုင် ဖြစ် ညှစ် လိုက် ၏။
သူ၏လိင် တန် မှာလည်း တဆတ် ဆတ် တုံကာ လိုးချင် စိတ် နှင့် မာထန် ပြီး ထွားလျှက် ရှိ၏။
သူ၏လီးကြီးမှာ အေးအေးမော် ရဲ့စောက် ဖုတ် အထက် နားမှာ အလျားလိုက် မေးတင် ဖိကပ် ထားရာ
မာထန် ကြီးထွားနေတဲ့ လီးက အေးအေးမော် ရဲ့ဗိုက် သားကိုထောက် မိနေရာ ပူနွေးသောအထိအတွေ့တစ် ရပ် ကို ခံစားမိသည် ။
တဖြည်းဖြည်း လူးလွန့် နေသော အေးအေးမော် ရဲ့မျက် နှာလေးမှာ ရမ္မက် သွေးကြောင့် ရဲရဲတွတ် နီကာ ချွေးစီးလေးများဖြင့် ပြောင် လက် ၍နေ၏။
နက် မှောင် သောဆံစလေးများ ကလည်း သူမ၏မျက် နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးကို တချို့တဝက် ဖုံးအုပ် လျှက် ရှိရာ မကြာခဏ လက် ဖျားဖြင့် ဖယ် ရှားနေရရှာ၏။
နက် မှောင် သော မျက် တောင် ကော့ကော့ကြီးများက အရည် လဲ့နေသော မျက် လုံးကို တဖျတ် ဖျတ် ရိုက် ခတ် ဖုံးအုပ် စေပြန် သည် ။
…..ရုန်းကန် ဖယ် ရှားငြင်းဆန် ရမည့် အစား သူမ၏လက် များက မောင် မောင် ကျောပြင် ကို ပွတ် သပ် ဆုတ် ချေဆွဲဖက် လျှက် ရှိနေပြန် သည် ။
မောင် မောင် မှာလည်း ဆန္ဒတွေပြင်းထန် လာပြီး ဖြစ် သမို့အေးအေးမော် ရဲ့ အဝတ် မဲ့ခန္ဓာကိုယ် ပေါ် အလျားလိုက် မှောက် နေရာမှ ဖင် ကြီးကိုတဖြေးဖြေးကြွလာ၏။
ထိုအခါ လီးထိပ် ကြီးက အေးအေးမော် ၏ဆီးခုံပေါ် မှနေ၍ စောက် ပတ် အကွဲကြောင်း အတိုင်း တဖြေးဖြေးလျော့ကျဆင်းလာသည် ။
အဲဒီတဒင်္ဂအတွင်းမှာ ပွတ် တိုက် မွု၏အရသာမှာ မတွေ့ဘူးသော မမေ့နိုင် စွမ်းသော အထိအတွေ့ကို ပူထူရှိန် ဖိန်းပြီး သိမ့် သိမ့် လွုပ် ခါလာကြသည် ။
“……..ဟင်း…..ဟင်း……..ဟင်း……ဟင်း…….” ခေါင်းလေးကို ဘယ် ညာ ယမ်းခါလူးလှိမ့် ရင်း
ကာမ၏အလျက် ဓာတ် စိမ့် ဝင် စီးဆင်းမွုဒဏ် ကို
အေးအေးမော် အလူးအလဲခံစားနေရသဖြင့် တဟင်းဟင်းငြီးငြူလိုက် မိရ၏……
စောက် ခေါင်းဝကို ပူနွေးသောမောင် မောင် ၏လီးထိပ် အထိအတွေ့ကြောင့်
သူမပေါင် နှစ် ချောင်းကို ဘေးသို့အစွမ်းကုန် ကားလိုက် မိသည် ။
ပြလွတ် ……ကနဲ အသားခြင်းပွတ် တိုက် သံတိုးတိုးလေးထွက် လာပြီး
လီးထိပ် က အေးအေးမော် ရဲ့ စောက် ပတ် ထဲကျွံကျသွားတော့၏………